Rasaasa News – Ethiopia, oo Codsatay in la Ciqaabo Wariyeyaasha Masar!
on June 23, 2014 1:03 am
Jijiga, June 23, 2014 – Masuuliyiinta Atobiya oo ka cadhooday waraysi xor ah oo ay ka qaadeen wariyeyaal Masaari ah, ayaa codsaday in shaqada laga caydhiyo, kuwa waraystay.
Gabadha wariyaha ah oo la yidhaahdo Rania Badawy, oo maalmo ka hor Telefishin gaar loo leeyahay ka waraysatay danjiraha Atobiya u jooga Masar Maxamud Dirir, ayaa shaqadii laga joojiyey, ka dibna kolkii ay Atobiya dacwaysay.
Rania Badawy, waxay sii daysaa show talk, kaas oo ay su,aal la xidhiidha khilaafka biyo xidheenka ay ku waydiisay danjiraha, kaas oo aflagaadeeyey, ka dibna ay khadka ka jartay.
Wasiirka arimaha dibada ee Atobiya Tedros Adhanom, oo dhawaan booqaday Masra, ayaa sidan oo kale cabasho ka sheegtay wariyeyaal ku waraystay Qaahira. Tedros Adhanom, ayaa yidhi wariyeyaasha Masar waxay dirayaan fariimo xun, kuwaas oo abuuraya iska horkeen shacabka labada dal.
Warfaafinta Atobiya, waxay gacanta ugu jirtaa dawlada, wariyeyaasheeduna kama hadli karaan waxa ka baxsan rabitaanka dawlada. Atobiya waa dalka ugu liita aduunka dhinaca cabudhinta warfaafinta, waxaana dawlada u xidhan in ka badan 150 wariye.
Warbaahinta dalka Masar, waxay la mid tahay ama la tartanaa dhinaca xoriyada, kuwa galbeedka, in kasta oo baryahan dalkaas ka jirtay siyaasad qasan.
Warfaafinta ka jirta Atobiya, way ka gadisan tahay mida ka jirta dalka Masar, waana midaas sababatay in ay ka cadhaysiiso masuuliyiinta Atobiya, oo aan xamili karin in si xor ah loo waraysto.